Ibsa Qeerroo Bishooftuu. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsIbsa Qeerroo Bishooftuu.
Qeerroon Bishooftuu sagaleen keenya dhokataadha; sagalee nuuf ta’aa jechuun iyyannaa dabarfatan.Gaafa Haacaaluu ajjeessaan sana nama 3 nu jalaa ajjeessan kan rasaasaa fi reebicha pooilisii federalaatiin jechuun kumand-post fi humna ittisaa dabalatee gochaa garaa jabummaa nurratti raawwachaa turan.
Mucaa Sulxaan jedhamu kan dhalootaan Arsii rasaasa afurii oliin bakka inni jilbbiinfatee diddaa agarsiisaa turetti, ajjeesaan; idduma sanitti mucayyoo Adaanuu jedhamtu kan dhalootaan handhura Sadeen Tuulamaa taate rasaasan ajjeesaan; isheenis akkuma Sulxan qeerroo waliin adda durummaan jala dhaabattee gootummaan wareegamte.
Mucaa Leellisaa jedhamu kan dhalootaan wallagga lixaa ta e immo hoteela pramid keessaa ba’uun abbaan hoteelicha dhukaasa itti banee ajjeese. Isa malees nama madeesse gaardichi.
Qeerroon tarkkanffii ijoollee keenya dhiigaan baasna jennee yeroo namticha eegaa turreetti humni kumand post dhoksuudhaan Miliksee fuudhe sokke. hidhanii fi gad lakkisanii hin beeknu. Abbaan hoteela kanaa deeggaraa gimbot 7; deeggaraa nafxanootaa ti.
Guyyaa lammataas nama saditu du’e; lama warra hiriira nagaa bahaa turan irratti haleellaa direct humni ittisaa fudhateen iddoo tokkotti du’an. Tokkommoo daandii irraa dhagaachaa qeerroon cufe guuri jedhaniin gaafa inni didu sababuma kanaaf ajjeessan.
Kana males ijoollee sabboontota ni adamsu; ammayyu. micayyoo Dammee jedhamtu kan Godambaa keessatti uffata aadaa Oromoo gurgurtus hidhanii jiru. Sababii t- shert Haacaaluu gurgurtus hidhanii haga har’aa hin hiikne.
Namoonni Mana hidhatti guuramaa jirus ni jiru; kanan ani maqaa isaanii hin beekne. Amma akka nuti baanee sagalee hidhamtootaa fi Hacaaluufirree hin taanee waraanni uffata normalii uffatee akkasuma uffata seeraa uffachuun nu gabroomsaa jira.
Walumaa galatti gabruummaa guddaa jala jirra. Akkasuma basaastonni faca’anii jiru. Isaaniis gochaa kanarraa akka of qusatan nuuf dhaamaafi.
Ijoolleen nafxanyaa deeggaran kan dhalootaan Habashaa ta’anis gaafa qeerroon karaa cufu isaan humna ittisa biyyaa dahoo godhachuun saaqaa turan; guyyaa lammataa. Kana malees, interneetii akka sabaatti Oromoo irraa Oromiyaa keessatti cites, hidhamtoota siyaasaa kannen ABO, KFO akkasumaa Oromoota sababii Oromummaaf gidirfamaa jiran akkan nuuf gadhiisaan cimsinee gaafanna.
Qeerroo diraamaa ppn nurratti hojjette kanas IJA ilaalee akka dammaqus nuuf dhaamaa; adaraa sagalee nuuf ta aa!
Ibsa Qeerroo Bishooftuu
Oduu Oolmaa Oromiaa
Obbo shaashadin taha bilxiginnaan akka malee midhannii haala hamma keessaa jira ja’an
Hidhamtoota mana hidhaatii hiikuun poolisiifi abbaa murtii yakkamaa taasise.